Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) - Hello Sayarwon
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု )
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ကဘာလဲ။
Hepatorenal syndrome (HRS) ဆိုသည်မှာအသည်းလုပ်ငန်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာသောအသည်းပျက်စီးမှု ရှိသူများတွင်ဆက်စပ်တွေ့ရှိရသောကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းချို့ယွင်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ကျောက်ကပ် အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားသောအခါ အဆိပ်အတောက် ပစ္စည်းများ ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင် စုပုံစပြုလာပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အသည်းချို့ယွင်းမှု ကို ဖြစ်စေပါသည်။ HRS သည် အလွန်အမင်း ပြင်းထန်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါကအမြဲတစေလိုလိုသေစေနိုင်ပါသည်။
HRS အမျိုးအစား ၁ သည် လျင်မြန်စွာကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေ၍ creatinineအများအပြားထွက်စေပါသည်။
HRS အမျိုးအစား ၂ သည် တဖြည်းဖြည်းကျောက်ကပ် ပျက်စီးမှု နှင့် ပို၍ ဆက်နွယ်ပါသည်။ ပို၍ ဖြည်းညင်းစွာ ဖြစ်ပွားပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာလည်းပို၍ သိမ်မွေ့ပါသည်။
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဤရောဂါသည် အဖြစ်များပြီးဝမ်းဗိုက်ဖောရောင်ခြင်း ဖြစ်သောလူနာများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လျင်မြန်စွဖြစ်ပွားသောကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူများ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
HRS ၏ ရောဂါလက္ခဏာများကိုအရေးပေါ်အနေဖြင့် ကုသသင့်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများကိုတွေ့ရပါကဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ အခြားကျောက်ကပ် ပြဿနာများကိုကုသနေဆဲဖြစ်ပါကကူသမှု အလျင်အမြန် ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
စောစီးစွာရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် ကုသခြင်းသည် အခြေအနေပို၍ဆိုးရွှားခြင်းကိုရပ်တန့် ပေးပြီးနောက်ထပ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပြင်းထန် သောအခြေအနေကိုကာကွယ်ရန် ဆရာဝန်နှင့် အချိန်မီ ပြသပါ။
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Hepatorenal syndrome သည် အသည်းခြောက်သောလူနာများနှင့် သွေးပေါင်တက်သောလူနာများတွင် များသောအားဖြင့် ဖြစ်ပွားတက်ပါသည်။
HRS သည် အသည်းခြောက်သောရောဂါတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော်လည်းအရက်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းခြောက်ခြင်းတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ HRS သည် အသည်းမခြောက်ဘဲအခြားအသည်းအခြေအနေများကြောင့် ရက်တိုအချိန် အတွင်းအသည်းပျက်စီးသောသူများတွင်လည်း ဖြစ်ပွား နိုင်ပါသည်။
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိပါကhepatorenal syndrome ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို မြှင့်တက်စေပါသည်။
အရက်ကြောင့် အလျင်အမြန် အသည်းရောင်ခြင်း
ဘတ်တီးရီယားကြောင့် ဆက်တိုက် ဗိုက်အမြှေးရောင်ခြင်း
အခြားရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ ( အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်တွင်)
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဤရောဂါရှိသည်ဟုဆရာဝန်ကသံသယရှိပါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပါမည်။ အသားဝါခြင်းဝမ်းဗိုက်ထဲတွင် အရည်များစုပြုံခြင်းအရေပြားပေါ်တွင် သွေးစုနာများပေါက်ခြင်းရင်သားတစ်ရှူးများရောင်ခြင်းစသော HRS ၏ လက္ခဏာများကိုရှာဖွေ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းအကြောင်းတိကျသောမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မည်။ သွေးစစ်ခြင်း နှင့် ဆီးစစ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ဤစစ်ဆေးချက် များသည် ဆရာဝန် အားအသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းများကိုခန့်မှန်းရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
တချို့ကိစ္စများတွင် HRS သည် အသည်းခြောက်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲအခြားအချက်များကြောင့် အသည်းပျက်စီးသောလူနာများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အသည်းခြောက်ခြင်းမရှိပါကဗိုင်းရပ် သို့မဟုတ် အရက်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းတို့အတွက် စမ်းသပ်မှုများကိုလုပ်ဆောင် ခိုင်းပါမည်။
Hepatorenal Syndrome (အသည်းနောက်ဆက်တွဲ ကျေက်ကပ်ပျက်စီးသော ရောဂါစု ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွေးကြောကျဉ်းဆေးများဟုခေါ်သောဆေးများသည် HRS ကြောင့်ဖြစ်သောသွေပေါင်ချိန်နည်းခြင်းကိုကူညီနိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကပ် ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန် ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဤသို့ လုပ်ခြင်းသည် သွေးအတွင်းမှ ပိုနေသောဆားများရေ နှင့် အန္တာရယ်ရှိသောအညစ်အကြေးများကိုစစ်ထုတ် နိုင်ပါသည်။ ဆေးရုံသို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ဆေးနိုင်သောဆေးခန်းများတွင ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အသည်းအစားထိုးခြင်းသည် HRS အတွက် အထိရောက်ဆုံးကုသမှု ဖြစ်ပါသည်။ အသည်းအစားထိုးရန် စောင့်ဆိုင်းမှု သည် ကြာမြင့်ပါသည်။ လူအများစုသည် အသည်းမရရှိခင် သေဆုံးရပါသည်။ အစားထိုးခွင့်ရပါကအသက်ရှင်ရန် အခွင့်အလမ်းများပါသည်။
HRS ၏ဆိုးကျိုးများသည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပုံမှန် အားဖြင့်ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကhepatorenal syndrome ကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
HRS ကိုကာကွယ်နိုင်သောတခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအသည်းကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်း ခြင်း ဖြစ်သည်။ အသည်းခြောက်ခြင်းကိုလျော့ချရန် အရက် အလွန်အကျွံသောက် ခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ။
အသည်းရောင်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသင့်ပါသည်။ အသည်းရောင်ရောဂါအေ နှင့်ဘီကိုကာကွယ်ဆေးထိုး၍ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အသည်းရောင်ရောဂါစီပိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။ အသည်းရောင်ရောဂါစီပိုးကိုကာကွယ်ရန် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
သင်နှင့် လိင်ဆက်ဆံသော ကြင်ဖော်ကိုအသည်းရောင်ရောဂါစီအတွက် ဆေးစစ်ပါ။
မည်သူနှင့်မျှ အပ်ကို မျှဝေ၍ မသုံးပါနှင့်
အသည်းခြောက်ခြင်း၏ အချို့ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုရှောင်ရှား၍ မရပါ။ သင့်တွင် အသည်းခြောက်ရောဂါ ရှိပါကသင့်၏ဆရာဝန်သည် သင့်၏ အသည်းလုပ်ငန်းများကိုပုံမှန် စောင့်ကြည့်ပေးပါမည်။ စောစီးသောရောဂါလက္ခဏာများကိုသိရှိရန် သွေးစစ်ဆေး ခြင်းများနှင့် imaging tests များပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatorenal_syndrome#Epidemiology . Accessed January 5, 2017.
Hepatorenal syndrome . http://www.healthline.com/health/hepatorenal-syndrome#Overview1 . Accessed January 5, 2017.
Hepatorenal syndrome. http://emedicine.medscape.com/article/178208-overview .Accessed January 5, 2017.Hepatorenal syndrome.
Hepatorenal syndrome. http://emedicine.medscape.com/article/178208-overview .Accessed January 5, 2017.